मेरो अनुभव : प्रचुर सम्भावना बोकेका नेता थिए कमल पंगेनी::Nepal's News Portal
मेरो अनुभव : प्रचुर सम्भावना बोकेका नेता थिए कमल पंगेनी
कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई राजनीतिमा सफल भएर अगाडी बढ्न संधैं एउटै कुराले साथ् दिंदैन । समाजसंग घुलमिल हुन सक्ने खुबी अनि नागरीकसंगअन्तर संवाद गर्न सक्ने व्यक्ती नै राजनीतिमा संधैं सफल रहँदै आएका छन् । स्व.कमल पंगेनीमा यी सबै गुणहरु थिए ।
वहाँ राजनीतिमा कति सफल कति असफल त्यो छुट्टै बहस या छलफलको विषय बन्न सक्ला तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा वहाँ समाजसंग छिट्टै घुलमिल हुन सक्ने तथा नागरीकसंग अन्तर संवाद गर्ने सक्ने खुबी भएको नेता हुनुहुन्थ्यो । समग्र स्याङ्जा जिल्लाको राजनीतिमा वहाँ प्रती मेरा पनि केहि विषयगतअसहमतीहरु थिए होलान । तर पनि विविधआयाम र गुणहरुको कारण वहाँ सफल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी हो ।
वहाँ प्रतीको मेरो अनुभव एकदम रोचक पनि छ । मैले वहाँलाई व्यक्तिगत रुपमा चिनेको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ पछि चालेको कदम पछि हो । यहाँ मैले अरु कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिन अर्थात नेपाली कांग्रेसको समग्र अवस्था त्यो समय के कस्तो थियो त्यो यहाँ अहिले उल्लेख गर्नु आवश्यक पनि छैन। स्व. कमल पंगेनीलाइ सम्झंदै गर्दा ती कुराहरु यहाँ उल्लेख गर्नु बान्छनीय पनि हुँदैन ।
त्यो बेला वहाँ काठमाडौँबाट आउनु भएको थियो अनि स्याङ्जा बजारको महेन्द्र चोकमा सुनील अर्याल दाइको कपडा पसल अगाडी उभिएर नै सबैसंग भलाकुसारी गर्दा वहाँलाई पहिलोपटक सुन्ने मौका मिलेको थियो । त्यहाँपत्रकार ओमशर्मा दाइ, साथीपत्रकार प्रकाश डोटेल लगायत हामी वहाँको कुरा सुनेका थियौं । कुरै कुरामा सुनीलअर्याल दाइसंग वहांको समसामयीक विषयमा तर्क र वितर्क एवं वादविवाद परेको थियो तर त्यो निकै सौहार्द एवं भाइचारा बढाउने खालको थियो । तत्पश्चात म व्यक्तिगत रुपमा वहांको बोली, प्रश्तुती र तर्क गर्ने शैलीबाट प्रभावीत बनेको थिए । वहांको व्यक्तित्व मलाई मन परेको थियो ।
त्यस पछि वहाँसंगअझ नजीक ६२ र ६३ को जनआन्दोलनले बनाएको थियो । आन्दोलनको क्रममा दिनभरको कार्यक्रम सकेर अब भोलीको कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउने भनी सात दलका नेता कार्यकर्ताहरु मिलेर योजना बनाउने शिलशिलामा वहांले राखेको कुरामा म लगायत केहि साथीहरु समर्थन जनाउथ्यौं भने मैले राखेको कुरामा पनि वहाँ जोडदार समर्थन गर्नुहुन्थ्यो । तत्पश्चात बल्ल वहांले मलाई व्यक्तिगत रुपमा चिन्नथाल्नु भएको हो । त्यसपछि वहांले मलाई मायाले ’कान्छु ’ भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो । २०६५ सालमा म उच्चअध्ययनको शिलशिलामा डेनमार्क आएं । त्यस पछि पनि वहाँसंग टेलिफोनमा सम्पर्क भै रहन्थ्यो ।
यहाँ एउटा प्रसंगउल्लेख गर्न मन लाग्यो । यो प्रसंग यहाँ सान्दर्भीक छ या छैन मलाइथाहा छैन तर मैले सान्दर्भीक ठानेर उल्लेख गर्न चाहें । नेपाली कांग्रेसको तेर्हौं महाधिवेशनभन्दा अगाडी हालका हाम्रा पार्टी सभापती नेता शेर बहादुर देउवा युरोप भ्रमणमा आउनु भएको थियो । त्यतिबेलावहाँ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता भेनर चिनिनु हुन्थ्यो । हामी जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका साथीहरुको पहलमा वहाँ डेनमार्क पनिआउनु भयो । जनसम्पर्क समिति डेनमार्कको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न वहाँआउनु भएको थियो । त्यतिबेला आएको मौका छोपेर समय लिएर मैले ५ मिनट जती देउवाजी संग कुरा गरेको थिएं। त्यो भेटमा मैले ’’ स्यांग्जामा पार्टी सभापती फेरी पनि कमल पंगेनी अङ्कललाइ बनाउनु पर्छ है दाइ’’भन्दा देउवाले भन्नु भयो ’’ स्यांग्जामा कमल त हो नि अरु को छ र भन्या ?’’
पार्टीको तेर्हौं महाधिवेशनमा डेनमार्कबाट पनि हामी साथीहरु सहित महाधिवेशन प्रतिनिधीको रुपमा काठमाडौँ गएको बखत विदेश स्थितजनसम्पर्क समितिका तथा महाधिवेशन प्रतिनिधी साथीहरुलाई पार्टीको भावी नेतृत्वको बारेमा स्व. कमल पंगेनीले ब्रिफिंग गर्नु भएको थियो त्यो समय म आँफै मिलाएको थिएं । महाधिवेशन पश्चात म डेनमार्क फर्कने बेला स्व. कमल पंगेनी अंकलले पार्टी सभापती शेर बहादुर देउवालाइ भेट्न जाने योजना बनाएअनुआर म, मेरो पिताजी गोपालप्रसाद ढकाल, अनियामप्रसाद पाण्डे भेट्न गयौं । भेटमा मैले व्यक्तिगत रुपमा पार्टी सभापती देउवाजीलाई सबैको सामुन्ने भनेको थिएं -’’पार्टी सभापती ज्यु, अब पार्टी सरकारमा पनि छिट्टै जालात्यो बखत हजुरले कमल पंगेनी अंकललाई मंत्री बनाउनु पर्छ है, हजुरलाई हरेक बखत सहयोग गर्दै आउनु भएको पनि छ वहाँमा मन्त्रालय हाँक्ने खुबी पनि छ क्षमतापनि छ ’’ यो सुनेर पार्टी सभापती ज्यु मुस्कुराउनु भयो र कमल पंगेनी अङ्कलतर्फ हेर्दै हुन्छ भन्ने संकेत सहित टाउको हल्लाउनु भयो त्यसै बीच स्व.कमल पंगेनी अङ्कलले ’’ अब अगाडी नै भन्दिएको छ केरे हेरौं ’’ भनेर जिज्ञासु बनेको हिजो नै हो किजस्तो लाग्छ ।
एकपटक रामादीको वृद्धवृद्धा आश्रम को लागि डेनमार्कमा रहेका नेपाली चेलीहरुको संस्था ’क्रिएटिभ नेपलीजवुमन’ ले पैसा संकलन गरेको थियो सो सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्ने मेरो जिम्मा थियो र त्यसको लागि स्व. कमल पंगेनी अंकललाई पनि साथ लैजाने योजनाअनुसार हामी त्यहाँ पुग्यौं वहाँ मनानीय सभासद पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसैले सहयोग रकम वहांको हातबाट दिंदा प्रभावकारी हुने ठानेर हामी संगै गएका थियौं ।
त्यहाँ रहने सबै बृद्ध बृद्धा आमाबुबाहरु सामेल हुनु भएको थियो हामीले सहयोग रकम हस्तान्तरण पश्चात हामीले फलफुल वितरण समेत गर्यौं । त्यहाँ रहने बृद्ध बृद्धा आमाबुबाहरु वहाँप्रती निकै खुशीहुनु भएको थियो र हामीलाई तपाईंको साथ् चाहिन्छ भनेर सबैले कमल पंगेनीतर्फ इशारा गर्दा वहांले मेरो साथ् सधैं छ भन्नु भएको थियो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ स्व. कमल पंगेनी समाजको जुनसुकैभाग संग पनि घुलमिल हुन सक्ने र प्रभावपार्न सक्ने क्षमताको हुनुहुन्थ्यो भनेर ।
एकपटक हामीहाम्रै घरमा बसिरहेकाथियौं । यो २०७१ सालको कत्तिक महिनाको कुरा हो । बिहानी पख थियो । एक्कासी कमलअंकल’मलाइ घुमायो मेरो प्रेसर हाइभयो’ भन्दै तलभुँइतलामा झर्नु भयो । वहांको चेहरा पुरै अत्तालिएको जस्तो थियो अनि मैले बुबालाई भने र कमल अंकललाई माथि कोठामा लगेर आरामगर्न भने। बुबाले तुरुन्तै क्लिनिक बाट रामचन्द्र अर्याललाई बोलाएर ल्याउनु भयो अनि वहांको चेकजाँच गरे पश्चात प्रेसर हाइभएकोले अर्यालले औषधीचलाउने सल्लाह दिनुभयो । सायद त्यहि एउटा समय थियो जतिबेला वहाँको शरीरमा प्रेसर अनि मुटु सम्बन्धी रोगले शुरुवाती डेरा जमाउन शुरु गरेको ।
पछिल्लो पटकमा नेपालजाँदा २०७४ सालको चैत्र महिना थियो । डेनमार्क फर्कने बेलापोखराबाट काठमाडौँ आउँदा स्व. कमल पंगेनी अंकलसंगै यती एयर्लाइन्सको जहाजमा संगै काठमाडौँ आइयो । वहाँले – ’आज साँझ अङ्कलभतीज संगै बस्ने हो है समय मिलाउनु केहि महत्वपूर्ण सल्लाह छ गफ छ’ भन्दै काठमाडौँ विमानस्थलको डोमेस्टिक टर्मिनल बाट हामी छुट्टीयौं । मेरो भोलि पल्ट बिहान नै डेनमार्क फर्कने उडान थियो त्यसैले म सकेसम्म आउंछु अङ्कलभनेर म मलाई लिनआएको गाडीमा म हिंडे । मेरो केहि जरुरी भेटघाट थियो काठमाडौँमा अनि समय पनि कम भएकोले म कमलअङ्कल संग त्यो साँझ भेट हुन जान पाइन । अंकलले साँझ ८ बजे सम्म पनि मलाई फोन गरेर खै त आएनौ ? भन्नु भयो । म आउन नसकेको कारण वहाँलाई बताएँ अनि’ल ठिक छ भोलिबिहान भेट होला नहोला एयरपोर्टमा केहि समस्या भए खबर गर म आइहाल्छु ’ भन्नुभयो
भोलिपल्ट म वहाँलाई बिदाई फोन गरि डेनमार्क तर्फको यात्रामा लागें । जहाजमा अंकल संग भेट हुनपाइन के महत्वपूर्ण सल्लाह र गफगाफ थियो होला भनेर अनेक तर्कनागर्दै म फर्कें । अहिले आएर सोच्छु -उक्तदिनको भेट भएको खण्डमा वहांले गर्न खोजेका कुराहरु, सल्लाहहरु सबै रहस्यको गर्भमाबिलाएर गए ।
काठमाडौँको वहांको निवास पुल्चोकमा धेरै पटक बसेको छु । कोहि व्यक्ती केहि समस्या परेर आएको छ र कहीं मन्त्रालय या बिभाग तथा कुनै कार्यलयमा निवेदन गर्नु पर्ने छ भने त्यो व्यक्तीको तर्फबाट वहाँ आफैं निवेदन लेख्नु हुन्थ्यो र सम्बन्धीत निकायमा समस्या परेको व्यक्तीलाई लिएर आँफै पनि संगै जानु हुन्थ्यो । यस्तो कमै देख्न पाइन्छ । वहाँ घरको काम गर्न कुनै लाज मान्नु हुन्थेन । घर परिवारलाई सघाउने देखि खाना बनाउन सम्म वहाँ अगाडी सरेको म आँफै देखे भोगेको छु । एउटा राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने असल गुण सबै वहाँमा थियो ।
आज हामी सामु वहाँ नभए पनि वहांले देखाउनु भएको दर्शन र बाटो हामीसंग छ । भनिन्छ राजनीतिमा गन्तव्यको तय हुँदैन तर राजनीतिमा वहाँ लामो दौडमा हुनुहुन्थ्यो कहिल्यै नथाक्ने दौडमा, तर प्रारब्धमा लेखेको कसैले देख्दैन वहाँजति दौडनु भयो त्यहीं सम्म मात्र प्रारब्धले साथ् दियो । स्याङ्जाले प्रचुर सम्भावना बोकेको एक होनाहार नेता गुमाएको छ । हार्दीक श्रद्धान्जली कमलअंकल । अहिलेलाई यती नै ।
दशैंमा नयाँ नोट कि नयाँ सोच ?
एसिड आक्रमणको बढ्दो ग्राफ
शालिकरामको रहस्यमय हत्या, रविउपरको षड्यन्त्र र निर्मला पन्तको सम्झना